Ifenisha Yesibhedlela Umbhede wesibhedlela, phezu kwamatafula ombhede, ikhabethe eliseceleni kombhede, izihlalo zesibhedlela.
Izixhobo zokuhlinza Amatafula wokusebenza, amalambu asebenzayo.
Dlulisa izinqola zokuhambisa Izinqola zokudluliswa ezenziwa ngesandla, inqola yokuhambisa amanzi.
Izihlalo zesibhedlela Usihlalo obekhona, usihlalo we-dialysis, isitulo sokumnika, isihlalo sokulinda.
Inqola yezokwelapha I-trolley ephuthumayo, i-trolley yemithi, i-Anesthesia trolley, inqola yomtholampilo
1. Ukuhlinzekwa okuqondile kwemboni: Ukuthunyelwa okuqondile, intengo eqondile, i-Direct QC, abasebenzi abangaphezu kwe-100 basebenza ngamashifu ukuqinisekisa ukuthi isikhathi sokulethwa sifika ngesikhathi.
2. Ikhwalithi enhle: Isitifiketi se-Receibed CE, ukuhlolwa kwenziwa konke ngenqubo yokukhiqiza, impahla nangemva kokufakwa, ukupakisha.
Insizakalo ye-OEM: I-R & D TEAM iyakufanelekela ukwenza iphrojekthi eyenziwe ngezifiso, izinsizakalo ze-OEM. Kude neShanghai itheku elikhulu lasolwandle lasechina, ukuhamba ngamahora amabili kuphela (150km).
Isipiliyoni seminyaka engu-8 sokuthekelisa: Thumela emazweni / izifunda ezingaphezu kwama-60. USA, UK, ITALY, DUBAI, THAILAND, PHILLIPPINES, SINGAPORE, IVIETNAM njll.
Sazisa yonke imibuzo ethunyelwe kithi, siqinisekisa ukunikezwa okuncintisana okusheshayo.
Siyasebenzisana namakhasimende ekubhideleni amathenda.Nikeza yonke imibhalo edingekayo.
Siyiqembu lokuthengisa, ngakho konke ukwesekwa kwezobuchwepheshe okuvela eqenjini lonjiniyela.
Siyayihlonipha impendulo yakho ngemuva kokuthola izimpahla.
Sinikeza iwaranti engu-12-24months ngemuva kokufika kwezimpahla.
Sithembisa zonke izingxenye zokungcebeleka ezitholakala ekusetshenzisweni kwempilo yonke.
Siphendula izikhalazo zakho kungakapheli amahora angama-48.
Sifaka i-oda lakho ohlelweni lokukhiqiza oluqinile, qinisekisa isikhathi sakho sokulethwa kwesikhathi.
Production / Ukuhlolwa umbiko ngaphambi oda lakho phama.
Ukuthumela isaziso / umshuwalense kuwe ngokushesha lapho i-oda lakho lithunyelwa.
Yonke imikhiqizo iqinisekisiwe.
Ingene ebangeni eligcwele lokukhiqizwa kwempahla yasesibhedlela
Qala umbukiso womhlaba jikelele
Qalisa ukumaketha kweziteshi eziningi
Thekelisa emazweni angama-20 nasendaweni
Ukuthekelisa okuthekelisa kufinyelela ku- $ 1,500,000
I-Laptop Trolley, Inqola yabahlengikazi engenantambo, Inqola Yezokwelapha Enamadraki, Inqola Yezokwelapha Yezokwelapha, Inqola Yesibhedlela, I-Trolley Medical,